တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျန်းဆူးပြည်နယ်တွင် COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေး လူထုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း စတင်ဆောင်ရွက်
နန်ကျင်း၊ ဧပြီ ၁၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျန်းဆူးပြည်နယ် နန်ကျင်းမြို့ Gulou ခရိုင်ရှိ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသောနေရာတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနေသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျန်းဆူးပြည်နယ် နန်ကျင်းမြို့ Gulou ခရိုင်ရှိ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသောနေရာတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် ပြည်သူများ တန်းစီနေကြစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျန်းဆူးပြည်နယ် နန်ကျင်းမြို့ Gulou ခရိုင်ရှိ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသောနေရာတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနေသည့် ပြည်သူများကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျန်းဆူးပြည်နယ် နန်ကျင်းမြို့ Gulou ခရိုင်ရှိ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသောနေရာတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် ပြည်သူများ စာရင်းသွင်းနေကြစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျန်းဆူးပြည်နယ် နန်ကျင်းမြို့ Gulou ခရိုင်ရှိ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသောနေရာတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် ပြည်သူများစောင့်ဆိုင်းနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျန်းဆူးပြည်နယ်တွင် COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် လူထုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း ကမ်ပိန်း စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
East China's Jiangsu launches mass vaccination campaign against COVID-19
Source: Xinhua| 2021-04-10 07:35:00|Editor: huaxia
1,4, 8,9- People receive COVID-19 vaccine atavaccination site in Gulou District of Nanjing, east China's Jiangsu Province, April 9, 2021. East China's Jiangsu Province has launchedamass vaccination campaign against COVID-19. (Xinhua/Li Bo)
2- A man receives COVID-19 vaccine atavaccination site in Gulou District of Nanjing, east China's Jiangsu Province, April 9, 2021. East China's Jiangsu Province has launchedamass vaccination campaign against COVID-19. (Xinhua/Li Bo)
3- People queue to receive COVID-19 vaccine atavaccination site in Gulou District of Nanjing, east China's Jiangsu Province, April 9, 2021. East China's Jiangsu Province has launchedamass vaccination campaign against COVID-19. (Xinhua/Li Bo)
5, 10 - People register for COVID-19 vaccine atavaccination site in Gulou District of Nanjing, east China's Jiangsu Province, April 9, 2021. East China's Jiangsu Province has launchedamass vaccination campaign against COVID-19. (Xinhua/Li Bo)
6-7- People wait to receive COVID-19 vaccine atavaccination site in Gulou District of Nanjing, east China's Jiangsu Province, April 9, 2021. East China's Jiangsu Province has launchedamass vaccination campaign against COVID-19. (Xinhua/Li Bo)
ပေကျင်းမြို့တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု မြန်ဆန်စေရေး COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းရွေ့လျားယာဉ်များ အသုံးပြု
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့တော်ရှိ ခရိုင်လေးခုတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု သွက်လက်မြန်ဆန်စေရန် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းရွေ့လျားယာဉ်များကို ဧပြီ ၁ ရက်မှစတင်အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ COVID-19 ရောဂါ တုံ့ပြန်ကိုင်တွယ်ပုံမှာ ချီးကျူးစရာကောင်းကြောင်း IMF အရာရှိပြော
တရုတ်နိုင်ငံ၏ COVID-19 ကပ်ရောဂါ တုံ့ပြန်ကိုင်တွယ်ပုံမှာ ချီးကျူးစရာကောင်းကြောင်း နှင့် ကြီးမားသောအကျပ်အတည်းတစ်ခုကို အောင်မြင်စွာ ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့(IMF) မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဧပြီ ၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ဘနွန်နိုင်ငံသို့ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေး အသုတ်နှစ်သုတ် ရောက်ရှိ
ဘေရွတ် ၊ ဧပြီ ၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
လက်ဘနွန်နိုင်ငံ၏ COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးအား အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် တရုတ်နိုင်ငံ ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည့် Sinopharm မှ ထုတ်လုပ်သော ကာကွယ်ဆေး အသုတ်နှစ်သုတ်သည် ဧပြီ ၆ ရက်တွင် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်၌ COVID-19 ရောဂါ ပြည်တွင်း ကူးစက်မှု လူနာသစ် နှစ်ဦးတွေ့ရှိ
ကူမင်း ၊ ဧပြီ ၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ်တွင် ဧပြီ ၆ ရက်က COVID-19 ရောဂါပြည်တွင်းကူးစက်မှု အတည်ပြုလူနာသစ်နှစ်ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးကော်မရှင်က ယနေ့ ဧပြီ ၇ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးသူ စုစုပေါင်း (၃.၂၃)သန်းရှိ
ကူမင်း၊ ဧပြီ ၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်၌ နယ်စပ်ခရိုင်မြို့နယ်(၂၅)ခုစသည့် အဓိကနေရာများတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဧပြီ ၅ ရက် အထိ ပြည်နယ်အတွင်း ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးသူ (၃.၂၃၂)သန်း ရှိကြောင်း ယူနန်ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးကော်မရှင်၏ ဧပြီ ၆ ရက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့တွင် COVID-19 အန္တရာယ်ဧရိယာများ ထပ်မံထည့်သွင်း
ကူမင်း၊ ဧပြီ ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် ရွှေလီမြို့တွင် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှု အန္တရာယ် မြင့်မားအဆင့်ဧရိယာ သုံးခုနှင့် အလယ်အလတ်အဆင့်ဧရိယာ သုံးခု ထပ်တိုးထားကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေးက ဘေးကင်းပြီး အစွမ်းထက်ကြောင်း ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ပြောကြား
တီဘလီစီ ၊ ဧပြီ ၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး Ekaterine Tikaradze က ပြီးခဲ့သော အပတ်အစောပိုင်းတွင် ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေးများသည် ဘေးကင်းစိတ်ချရပြီး အစွမ်းထိရောက်မှု ရှိကြောင်း ဧပြီ ၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၌ တက္ကသိုလ်နယ်မြေတွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုများ မြှင့်တင်မည်
ပေကျင်း ၊ ဧပြီ ၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပညာရေးဌာနများ နှင့် တက္ကသိုလ်များအား ဒေသတွင်းရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုး လုပ်ငန်းများနှင့်အတူ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းသည့် အသိပေးကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ရွှေလီမြို့တွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
ကူမင်း၊ ဧပြီ ၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ရွှေလီမြို့ ကျင်ချန်ဆေးရုံ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသည့် နေရာတွင် မြို့နေပြည်သူများ တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေသည်ကို ဧပြီ ၁ ရက် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ရွှေလီမြို့ ကျင်ချန်ဆေးရုံ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသည့် နေရာတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းနေသည်ကို ဧပြီ ၁ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ရွှေလီမြို့ ကျင်ချန်ဆေးရုံ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသည့် နေရာတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် မေးမြန်စုံစမ်းနေသည်ကို ဧပြီ ၁ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ရွှေလီမြို့ ကျင်ချန်ဆေးရုံ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသည့် နေရာတွင် စောင့်ဆိုင်းနေသူများအား ဧပြီ ၁ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ရွှေလီမြို့ ကျင်ချန်ဆေးရုံ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသည့် နေရာတွင် အချက်အလက်ဖြည့်စွက်ရေးသားနေသည် ဧပြီ ၁ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် တက်ဟုန်း တိုင်လူမျိုး ဂျိမ်းဖောလူမျိုးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ပြည်နယ်ခွဲ ရွှေလီမြို့တွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုလုပ်ငန်းများကို ဧပြီ ၁ ရက်က ဘက်စုံ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စတင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
新华社记者 陈欣波 摄